Rasaasa News – Colaaddii Itoobiya iyo Soomaaliya Ma Dhamaan!
Colaaddii Itoobiya iyo Soomaaliya Ma Dhamaan!
on February 11, 2017 6:49 pm
Feb 11, 2016 – Colaada maxaa sal u ah? Colaada ma la xalin karaa? Itoobiyanka iyo Somalidu, waa daris Eebe Wayne ayaana ka dhigay daris. Darisnimadu waa wax wanaagsan kolkay ay darisku is-ixtiraamaan, wanaagna ku dhaqmaan, waxay ku wada noolaan nabad, jacayl, iskaalmaysi iyo wada jir.
Nolosha caadiga ah, dadka dariska wanaagsan way isjeclaadaan caruurtooduna wy saaxiibaan. Dariska xuna way isnacaan wayna dagaalamaan maalin walba. Hadaba labada qoys ee dariska ah ma wada xuma, laakiin mid baa xun oo jecel xumaanta, gardaro joogta iyo xatooyana ku sameeya dariska fiican. Dariska fiican si uu uga nabadgalo sharta dariska xun wuu ka digo rogtaa hantida ma guurtada ahna wuu gadaa.
Hadaba waxaa is waydiin leh labo qoys oo daris xun way kala guuraan, laakiin Labo dal oo mid daris xun yahay muxuu noqon xalkoodu? Eebe wayne dhulka uu qoloba meel siiyey qolona ma ogola in ay qolada kale dhulkeeda uga tagto, hadayna sir iyo suulin kale jirin.
Soomaalida iyo Itoobiyada colaada u dhaxaysa ma aha darisnimada, laakiin waa daris dulan ah iyo mid diidan. Itoobiya waxay ka qayb gashay boobkii Yurub ku qaybsatay Afrika, muddo kadib Yurub Afrika way ka guurtay, laakiin Itoobiya dariskeeda ay dulmiday wali xiligan casriga ah way garan la,adahay in ay raali galiso oo ay u celiso dhulka iyo dadka ay xooga kaga qaadatay. Inta arintaasi jirtan nabad iyo darisnimo wanaag dhexmara dadka Soomaalida iyo Itoobiyada way adag tahay.
Labada dal waxaa dhaxmaray dagaalo xoogle oo laga dhaxlay khasaare, wayna dhici doonaan dagaalo kale oo keeni doona khasaare iyo dhibaato, wayna socon inta Itoobiya dulmi wax ku doonayo. Somali region (Ogaden) waa gabalka 5aad sagaalka gabal ee Itoobiya xiligan u qaybisay maamulkeeda. Xukuumadihii hore ee Itoobiyana waxay ugu yeedhi jireen magacyo kale, Itoobiya way ogtahay in dhulka iyo dadkuba Soomaali yihiin, laakiin garashada caqliga ayaa maqan.
Muddo 26 sano ah, Soomaaliya waxaa ka socday dagaalo sokeeye. Itoobiya dagaalada sokeeye way ka faa,iidaysatay, waxayna u aragtay fursad dahabi ah. Isku dirka iyo kala dirka dadka Soomaalida ayey Itoobiya ka shaqaysay 26kii sano ee tagay, waxayna u tusaysay masuuliinta muquunada ah ee ay dadka Soomaalida kala baxday in Itoobiya ay tahay saaxiibka 1aad ee Soomaaliya.
Qaar ka mid ahaa masuuliyiinta Soomaalida oo madax gaabni ah, ayaa faagaare ka sheegay in ay dhamaatay taariikhdii madoobayd ee u dhaxaysay Soomaalida iyo Itoobiya.
Dagaaladii ka socday Gabalka Soomaalida (Ogaden) ee ay Itoobiya haysato, kuwaas oo ay wadayna Jabhada Wadaniga Xoraynta Ogadeeniya (JWXO), waxaa colaad kala horyimid dadka Soomaaliyeed iyo maamulada beenta ay ku dhisatay Itoobiya. Kumanaan baa ku dhintay gacanta dadka Soomaaliyeed, kumanaana waxaa gacanta loo galiyey Itooiya, kuwaas oo aan laga warhayn geeri iyo nolol ehelkoodna ay maqleen in ay Jeel-Ogaadeen ku jiraan kaliya.
Dadka Soomaalida maanta waxaa ka muuqata in ay ka daaleen colaad iyo isku dir dhaxdooda ah oo ay abuuri jirtay Itoobiya, way muuqataa in maanta garashadii u soo laabatay 26 sano ka dib. Dadka Soomaalida oo u kala baxsaday aduunka ayey taabatay dhibaatada ka jirta dalkooda meel ay joogaanba, waxayna farta ku fiiqayaan xukuumada Itoobiya oo ayna sahlanayn cadaawada ay u qabto dadka Soomaaliyeed.
Doorashadii bishan Feberuary 8,2017 ka dhacday Soomaaliya xigmad ha u noqoto Itoobiya, hana ogaato in aan xumaan ka dhaxayn dadka Soomaaliyeed. Faragalintii, been abuurkii taariikheed iyo hanjabaadii Itoobiya 26ka sano waday in ayna soconayn waa in ay Itoobiya ogaataa.
Cadaawada Itoobiya iyo Soomaaliya, in ay sii waynaato mooyee waligeed ma dhamaanayso, inta Itoobiya ay xooga ku haysato dhulka Soomaaliyeed ee Ogaden. Xudunta cadaawada iyo xalka nabada kama dambaynta ah ee Geeska Afrika, waa in Itoobiya aqbashaa celinta dhulka Soomaalida Ogaden.
Xukuumada Itoobiya haatan waxay jirtaa 26 sano, waxaana talada dalka haya dad tira yar, waana xukuumad cadaadis ku dhisan (dictatorship), dalalka la dariska ahna wanaag kama dhaxeeyo. Hadaba si looga hortago dhibaato ka dhalata colaada, waa in laga shaqeeyaa wanaaga iyo wada xaajood dib u soo celin kara in lays xurmeeyo.
Waxaa muuqata in Soomaaliya ay noqonayso dalka ugu dimoqraatisan dalalka bariga Afrika, dhinaca dhaqaalahana waxaa lagu wadaa in ay kaalinta koobaad ka galayso isla dalka bariga Afrika.